Falaanqeyn: Dakhliga garoonka Cisaley iyo Dekedda Ceel-Macaan oo khatar ku noqon kara dhaqaalaha Dowladda federalka - Caasimada Online
Home Maqaalo Falaanqeyn: Dakhliga garoonka Cisaley iyo Dekedda Ceel-Macaan oo khatar ku noqon kara...
Falaanqeyn: Dakhliga garoonka Cisaley iyo Dekedda Ceel-Macaan oo khatar ku noqon kara dhaqaalaha Dowladda federalka
Muqdisho (caasimada Online) – Maamul-gobaleedka HirShabelle iyo Xildhibaano ka tirsan BFS ayaa dadaal ballaaran ugu jira sidii loo hawl-gelin lahaa Garoonka Cisaley iyo Dekedda Dabiiciga ee Deegaanka Ceel-macaan ee Gobalka Sh/dhexe, si Kharajka ugu soo xerooda loogu adeegsdo Adeegyadda Maamulka HirShabelle.
Dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa socda, iyadoo Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali la qorsheynayo inuu hawl-geliyo Dekedda Ceel-macaan, halka Xildhibaan Caddow Cali Gees maalgelin doono Garoonka Diyaaradaha ee Cisaley.
Xildhibaan Caddow Cali Gees ayaa ah Ganacsadaha haysta Qandaraaska Qaadka ugu badan ee Somalia la keeno, wuxuuna leeyahay Diyaarado yaryar oo Qaadka lagu soo daabulo.
Haddii la taaba-geliyo Labadaasi Mashruuc waxay horseedi kartaa inuu Maamulka HirShabelle helo ilo dhaqaale oo ku filnaan karta Dhaqaalaha lagu socodsiinayo Hawlaha Maamulka iyo Adeegyadda Bulshadda ku nool Goballadda Sh/Dhexe iyo Hiiraan.
Danjire Maxamed Cali Ameriko oo la hadlay Radio Dalsan ayaa soo dhaweeyey Tallabadda lagu hawl-gelinayo Dekedda Ceel-macaan iyo Garoonka Cisaley,wuxuuna xusay inay Kumnaan Dhallinyaro iyo Xoogsato ah shaqo ka heli doonaan Dekedda iyo Garoonka u gaarka ah Maamulka HirShbelle.
Dadaalka ay wadaan Xildhibaanadaasi oo mar isku soo taagay Xilka Madaxweynaha ayaa waxa uu culays ku noqon doonaa Dhaqaalaha Dowladda Federalka oo iyadu dareensan in Kala-bar Diyaaradaha Qaadka u wareegi doonaan Garoonka Cisaley.
Sidoo kale, Maraakiibta Badeecadaha Raashinka iyo Qalabka wada waxay rarkooda si fudud oo aan Canshuur badan lahayn uga soo dejin karaan Dekedda Ceel-macaan, taasina ay abuuri karto inay Badeecaddaha raqiis ka noqdaan Goballadda ku hareeraysan Dekedda Ceel-macaan.
Waxaana hubaal ah haddii Maamulka HirShabelle, Siyaasiyiinta iyo Dadka Deegaanka iska kaashadaan arrintaasi inay taasi wax u dhimi karto Dakhliga Dowladda Federalka uga soo xerooda Canshuurha Qaadka ee ka soo dega Garoonka Aadan Cadde iyo Maraakiibta ku soo xerta Dekedda Weyn ee Muqdisho.
Xeel-dheerayaasha ayaa rumeysan in Fursad Dahabi u noqon karto haddii ay Maamulka hirShabelle taaba-geliyaan Mashaariicdaasi, iyadoo Dastuurka Federalka oggol yahay inay Maamul-gobaleedyadda abuurtaan Ilo-dhaqaale oo ay ku socodsiin karaa Adeegyadda Bulshadda, Ammaanka iyo Horumarinta.